January 2021 - Myanmar People Alliance
၁ပတ္အတြင္း သိသိသာသာေငြဝင္လာေစမည့္ ယၾတာအလႉ
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ၁ပတ်အတွင်းသိသိသာသာငွဝင်လာစေရမည့်ယတြာအလှူ ယတြာတွေကို သေချာတွက်ချက်ပြီးမှမျှဝေပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ငွေဝင်လာစေရန်အတွက်အာမခံပါသည် Shareပြီးသာ သေချာလိုက်လုပ်ပါ မိတ်ဆွေတွေကို ထက်ဆင့်မျှဝေပေးပါ ငွေသေချာပေါက်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ မြတ်စွာဘုရားကိုမနက်၆:၀၀ကနေ၁၀:၀၀အတွင်း ပြောင်းဖူးပြုတ်၁ဖူး ကွေကာအုတ်၁ခွက်ပူပူလေးကပ်လှုပေးပါ။ပြီးရင် (၂၄)ပစ္စည်း ၅ခေါက်ရွတ်ပါ။ဘုရားကိုကပ်လှုရင် ခြေလက်မျက်နှာဆေးပြီးမှ သေချာကပ်လှုပါ။Shareပြီး လုပ်ပါ၁ပတ်အတွင်းထူးခြားပါတယ်။ဆုတောင်းရမှာက မြတ်စွာဘုရားကို
ဆယ္လ္ဖီအလြန္အကြ်ံဆြဲျခင္းက “Selfitis” ေခၚစိတ္ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ဆယ်လ်ဖီအလွန်အကျွံဆွဲခြင်းက “Selfitis” ခေါ်စိတ်ရောဂါတစ်ခုဖြစ် စိတ်ကျန်းမာရေးနိုင်ငံတကာဂျာနယ်ကနေဆယ်လ်ဖီအလွန်အကျွံရိုက်ခြင်းက “Selfitis” လို့နာမည်တပ်ထားတဲ့ စိတ်ရောဂါတစ်ခုအနေနဲ့ စာရင်းသွင်းထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တုန်းကလည်း ဒီနာမည်နဲ့နာမည်တပ်ခဲ့ပေမယ့်သတင်းမှားသာဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုကတော့တကယ်နာမည် စာရင်းဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်လ်ဖီအလွန်အကျွံရိုက်သူတွေကို ခေါင်းစဉ်ပြန်ခွဲကြည့်တဲ့အခါမှာ အခြေအနေတွေကိုလိုက်ပြီး ထပ်ကွဲသွားပါသေးတယ်။ အောက်မှာတော့သုတေသနလုပ်ထားတဲ့ထဲကရလဒ်တွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယမှာဒီသုတေသနကိုကျောင်းသား ၂၂၅ယောက်နဲ့စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးဆယ်လ်ဖီရိုက်သူ၃မျိုးခွဲလိုက်ပါတယ်။ဒီသုတေသနအရသူတို့ထဲက ၉%ဟာတစ်နေ့ကိုဆယ်လ်ဖီပုံ၈ပုံထက်မနည်းရိုက်တတ်ပြီး
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် သွားဖြူချင်တဲ့သူတွေနဲ့ သွားဝါလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် ဝါညစ်နေတဲ့သွားတွေကို ဖြေးဖြေးချင်းစီပြန်ဖြူလာစေမယ့်အိမ်တွင်းဖြစ်နည်းလမ်းကောင်းကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ချက်ချင်းကြီးဖြူလာမှာမျိုးတော့မဟုတ်ပေမယ့်၃ရက်တစ်ခါ၊၅ရက်တစ်ခါ ပုံမှန်မပျက်အကွက် လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဝါနေတာတွေတဖြေးဖြေးလျော့သွားပြီးပြန်ဖြူလာမှာပါ။ မျိုးရိုးအရသွားဝါတာမျိုးကျတော့အိမ်တွင်းနည်းလမ်းလောက်နဲ့ အဆင်မပြေပါဘူး။ သွားဆေးခန်းမှာ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးလေဆာပစ်တာမျိုးလုပ်မှသာ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ကြက်သွန်ဖြူ၊သံပယိုရည် (သို့)သံပုရာရည်၊ သွားတိုက်ဆေး၊နနွင်းမှုန့်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ဈေးထဲမှာရောင်းချနေတဲ့ငှက်ပျောသီးအခိုင်တွေဟာများသောအားဖြင့် အစိမ်းတွေချည်းပါပဲ။ ငှက်ပျောသီးအစိမ်းတွေဝယ်လာပြီးမမှည့်ခင်မှာစားချင်တဲ့အခါသရေကျနေရုံကလွဲပြီးဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး ။ ဒီတော့အခုလိုမဖြစ်ရအောင်ကိုယ်စားချင်တဲ့အချိန်မှာမှည့်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ငှက်ပျောသီးတွေကိုမှည့်စေနိုင်တဲ့နည်းလမ်း၃မျိုးရှိပါတယ်။ ၁- တစ်နာရီအတွင်းမှည့်စေခြင်း ငှက်ပျောသီးတွေကိုတစ်နာရီအတွင်းမှည့်စေချင်ရင်တော့ ငှက်ပျောသီးစိမ်းတွေကိုOvenထဲထည့်ပြီးတော့ ၁၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့တစ်နာရီတိတိ ကင်လိုက်ပါ ။တစ်နာရီကြာတဲ့အခါ Ovenထဲကထုတ်ပြီးတော့ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပြီးအအေးခံထားပါ။အေးသွားတဲ့အခါသင့်ရဲ့ငှက်ပျောသီးဟာအလွန်အရသာရှိပြီး ချိုမြိန်မှည့်ဝင်းနေတဲ့ငှက်ပျောသီးဖြစ်သွားကြောင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ၂-
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် အမျိုးအမည်များပြားလှသောရေခူများထဲတွင်ရေလုပ်သားများအားအန္တရာယ်ပေးနိုင်သောအဆိပ်အတောက် ပြင်းတဲ့ ရေခူနှစ်မျိုးမှာခူထောင်း နှင့ခူမီး ခေါ်ခူမီးတောက်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ခူထောင်းရဲ့ခေါင်းပိုင်းဟာပန်ကန်းလုံးကဲ့သို့ ပုံသဏ္ဌာန်ရှိပြီး ရှည်လျားတဲ့ အမြီးတန်းလည်း ပါရှိပါတယ။ အကြီးဆုံး အရွယ်အစားမှာ လက်သီးဆုပ်ခန့်ရှိပြီး အမြှီးမှာ နှစ်တောင်မှ သုံးတောင်ခန့် အထိရှိကာ ထိုခူထောင်း၏
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် လက်ဖဝါးပေါ်ကလက်ချောင်းလေးတွေရဲ့အတိုအရှည်ကနေ လူတွေရဲစိတ်တစ်ချို့ကို ပြောပြနေတယ်ဆိုတာသင်တို့သိပါသလား၊အများကြီးတော့ကွက်တိမှန်နိုင်မယ်မထင်ပင်မဲ့အနည်းငယ်တော့တူလိမ့်မယ်လိုယုံပါတယ် ဘယ်လိုလက်အတိုအရှည်ပုံစံတွေကဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထားမျိုးလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင် လက်သူကြွယ်ကလက်ညိုးထက်ပိုရှည်တဲ့ လက်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့သူတွေဟာ ချောတာထက်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးလူချစ်လူခင်ပေါသူတွေပါ။ လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာသူတစ်ပါးတွေရဲ့စိတ်ကိုအကဲခက်တတ်တာကြောင့် လူချစ်များတတ်ကြပါတယ်။ စိတ်မြန်ပြီး စိတ်ဆတ်တတ်တဲ့အကျင့်လေးရှိတာကြောင့် လူအများအမြင်မှာဒေါသကြီးတယ်လို့တော့ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပင်မဲ့မဟုတ်မခံစိတ်မျိုးလေးပါ။ ရည်မှန်းချက်တွေခိုင်မာပြီး အမြင့်ဆုံးဆိုတာတွေကိုမှန်းထားလေ့ရှိတတ်ကြပါတယ်။ စိတ်ကိုအကြာကြီးမညစ်တတ်ပဲ တစ်လမ်းမရရင်
သင့္အသက္ဘယ္ေလာက္လဲ?ဘာေန႔ေမြးလဲ?သာမွန္မွန္ေျပာပါ . . .
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် သင့်အသက်ဘယ်လောက်လဲ?ဘာနေ့မွေးလဲ?သာမှန်မှန်ပြောပါ မှန်လွန်းလို့ထပ်ခါထပ်ခါဖတ်ဖြစ်တဲ့ဇနကဟောကိန်း ဘုရားအလောင်းတော် မဟာဇနကမင်း၏ ဖြစ်စဉ်ခုနှစ်မျိုး အခြေပြု၍ ရှေးဆရာကြီးများက တီထွင်၍ တွက်ကိန်းဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အလွန်လွယ်ကူရှင်းလင်း၍ ယနေ့ပညာရှင်များထိ သုံးစွဲနေသော တွက်ကိန်းဖြစ်ပါသည်။ တွက်ကိန်းအားပုံသေကားချမယူပဲမဟာဘုတ်စသောအခြားတွက်ကိန်းများနှင့်ညှိနှိုင်းဟောပြောလျှင်အလွန်အစွမ်းထက်သောဟောကိန်းဖြစ်သည်။ အဟောကြည့်နည်း…. ဥပမာ – မိမိက
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် လောကမှာ ယောကျာ်းနဲ့ မိန်းမတွေ့ကြုံဆုံကွဲဖြစ်ကြရတာဓမ္မတာပါဘာထူးဆန်းလို့လဲလို့မေးချင်စရာဟုတ်တယ်မထူးဆန်းဘူးထူးဆန်းတာတာကတော့အဲဒီမိန်းမတစ်ယောက်ဟာကိုယ့်အပေါ်သစ္စာမရှိတန်ဖိုးမထား ကိုယ့်အပြင်အခြားအခြားသောမိန်းမတကာမိန်းမတွေကိုလစ်ရင်တွယ် ချောင်ရင်နှိုက်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ယောကျာ်းကို ရထားပြီဆိုရင်တော့ အဲဒါ ထူးဆန်းနေပြီ ကျွန်မငယ်ရွယ်စဉ်စိတ်ဓာတ်မရင့်ကျက်ခင်ကာလတွေ တရားတွေ ကို နားနဲ့ပဲနာခဲ့ပြီး နှလုံးသားနဲ့ မနာတတ်ခင်ကာလတွေတုန်းက ယောကျာ်းတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို ဖောက်ပြန်တာ ခံရပြီဆို
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ၁။ “အမြင့်တစ်နေရာကနေ ပြုတ်ကျတယ်”လို့ အိပ်မက်မက်တယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ အချစ်ရေးမှာ ထူးဆန်းတာတွေကြုံရမယ့် နိမိတ်ဖြစ်ပါတယ် လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင် ပြဿနာဖြစ်နိုင်ပြီး အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ ရင်ခုန်စရာလေးတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ နိမိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ “သွားကျိုးသွားတယ်”လို့ အိပ်မက်မက်တယ်ဆိုရင် လူပုံအလယ်မှာ
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် အိမ်မှာကပ်ထားရင်ကပ်ရောဂါ ဘေးကြီးကနေကင်းဝေးလိမ့်မယ်ယုံကြည်ပါတယ် အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာ..ကပ်ထားရင်ကပ်ရောဂါ ဘေးကြီးကနေ မြန်မာတစ်ပြည်လုံးကင်းဝေးလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်…. ရှေးရှေးတုန်းကလည်း ကျောက်ရောဂါ..ပုလိပ်ရောဂါ.. ဝမ်းရောဂါ အစရှိသဖြင့်ကူးစက်လွယ်တဲ့ ရောဂါဆိုးတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြဘူးတယ်…။ တရွာလုံး ရွာလုံးကျွတ် ကူးကုန်ပြီးလူတွေ အကုန်သေကြသတဲ့.. လူတွေသေတော့မကောင်းဆိုးရွားတွေ ပျော်တာပေါ့..သူတို့တွေ